Akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom – 2azụ
Home / Bible / Akwukwo ozi / Akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom
Ndị Rom 1
1:1 Paul, a ohu Jizọs Kraịst, akpọ dị ka ihe Apostle, iche maka Oziọma nke Chineke,
1:2 nke o kwere ná nkwa tupu, site n'ọnụ ndị amụma, n'ime Akwụkwọ Nsọ,
1:3 banyere Ọkpara ya, onye e mere maka ya si n'agbụrụ Devid dị ka anụ ahụ,
1:4 Ọkpara Chineke, onye e kpebirila na omume ọma dị ka Mọ nke ido si mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst,
1:5 site onye anyị natara amara na onyeozi, n'ihi aha ya, maka nrubeisi nke okwukwe n'etiti mba nile,
1:6 onye ị na-a na-akpọ Jizọs Kraịst:
1:7 Ndị niile na-na Rom, onye m hụrụ n'anya nke Chineke, na-akpọ ka ndị senti. Amara gị, na udo, si n'aka Chineke bụ Nna anyị nakwa n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
1:8 N'ezie, M na-enye Chineke m ekele, site n'aka Jizọs Kraịst, mbụ maka unu nile, n'ihi na okwukwe unu a na-mara ọkwa nile ụwa.
1:9 N'ihi na Chineke bụ onye akaebe m, onye m na-eje ozi mmụọ m site Gospel nke Ọkpara ya, na-ewepughi na edebewo m ihe ncheta nke ị
1:10 mgbe niile n'ekpere m, -arịọ na n'ụzọ ụfọdụ, na oge ụfọdụ, M nwere ike a na-agaziri njem, n'ime uche Chineke, bịakwute gị.
1:11 N'ihi na-agụsi m agụụ ike ịhụ unu, ka m wee inye unu a ụfọdụ ime mmụọ amara ike ị,
1:12 kpọmkwem, ka kasiri ọnụ na gị site na nke dị ibe: okwukwe gị na nke m.
1:13 Ma m chọrọ ka ị mara, ụmụnna, na m na-bu n'obi na-abịa gị, (ezie na m na e gbochiri ọbụna ruo ugbu oge) ka m wee nweta ụfọdụ mkpụrụ n'etiti unu, dịkwa nnọọ ka n'etiti ndị Jentaịl ndị ọzọ.
1:14 Na Grik na uncivilized, ka onye maara ihe na ndị nzuzu, M ụgwọ.
1:15 Ya mere n'ime m na e nwere a apostle-agbasa ozi ọma na ị na-na-na-na Rome.
1:16 N'ihi na ihere adịghị eme m nke Oziọma. N'ihi na ọ bụ ike nke Chineke rue nzọpụta nile kwere ekwe, Ju na mbu, na nke Grik.
1:17 N'ihi na ikpe ziri ezi nke Chineke na-ekpughe n'ime ya, site n'okwukwe rue okwukwe, dị nnọọ ka e dere: "N'ihi na dị nnọọ otu ndụ site n'okwukwe."
1:18 N'ihi na ọnụma nke Chineke na-ekpughe si n'eluigwe ihe ọ bụla enweghị nsọpụrụ na-ezighị ezi n'etiti ndị ikom iru anya eziokwu nke Chineke na-ezighị ezi.
1:19 N'ihi na ihe a maara banyere Chineke pụtara ìhè na ha. N'ihi na Chineke puta ìhè ha ya.
1:20 N'ihi na-adịghị ahụ anya ihe nile banyere ya na e mewo ka conspicuous, ebe ọ bụ na ihe e kere eke nke ụwa, -aghọta ha site n'ihe ndị na e mere; N'otu aka ahụ ebighị ebi ya omume ọma na divinity, nke ukwuu nke mere na ha enweghị ihe ngọpụ.
1:21 N'ihi na ọ bụ ezie na ha maara Chineke, ha adịghị enye Chineke otuto, ma ọ bụ na-enye ekele. Kama, Ha ghọrọ ebelatawo na echiche ha, ha na nzuzu obi amabughị.
1:22 N'ihi na, mgbe na-akpọsa onwe ha ịbụ ndị maara ihe, ha ghọrọ ndị nzuzu.
1:23 Ha gbanwere ebube nke apụghị ire ure Chineke maka oyiyi nke ihe oyiyi nke ire ure nwoke, na nke na-efe efe ihe, na nke anọ legged anụ ọhịa, na nke agwọ.
1:24 N'ihi nke a, Chineke nyefee ha n'aka ka ọchịchọ nke ha onwe ha obi n'ihi adịghị ọcha, nke mere na ha nọ n'ahụhụ ahụ nke ha na kparịrị n'etiti onwe ha.
1:25 Ha gbanwere eziokwu nke Chineke a ụgha. Na ha na-efe na-eje ozi e kere eke, kama Onye kere, Onye agọziworo mgbe nile ebighị ebi. Amen.
1:26 N'ihi nke a, Chineke rara ha nye ihere agụụ mmekọahụ. Ọmụmaatụ, ha inyom gbanwere eke ojiji nke ahu maka a ojiji nke bụ megide uwa.
1:27 Na N'otu aka ahụ, ndị ikom na-, agbahapụ eke ojiji nke nwanyị, ọku na ọchịchọ ha maka ibe: ụmụ nwoke na-eme na ụmụ nwoke ihe bụ ihere, na inweta n'ime onwe ha nkwụghachi ụgwọ na bụchaghị n'ihi njehie ha,.
1:28 Ma ebe ọ bụ na ha na-egosi na Chineke na ihe ọmụma, Chineke rara ha nye a n'omume rụrụ arụ si eche echiche, ka ha wee na-eme ihe ndị ahụ nke na-ekwesịghị ekwesị:
1:29 ọ na e-ejupụta niile ajọ omume, ọjọọ, ịkwa iko, oké ọchịchọ, ajọ omume; full anyaụfụ, igbu ọchụ, esemokwu, aghụghọ, n'agbanyeghị, n'ịgba asịrị;
1:30 nkwutọ, mkpọrọmasị n'ebe Chineke nọ, mkparị, mpako, onwe-ebuli, devisers ọjọọ, enupụrụ ndị mụrụ ha,
1:31 nzuzu, agazi; enweghị mmetụta ịhụnanya, enweghị nruwe, enweghị ebere.
1:32 na a, ezie na ha maara ikpe ziri ezi nke Chineke, aghọtaghị na ndị na-eme otú ahụ na kwesịrị ọnwụ, ma ọ bụghị naanị ndị na-eme ihe ndị a, kamakwa ndị na-kwenye ihe e mere.
Ndị Rom 2
2:1 N'ihi nke a, O nwoke, ọ bụla n'ime unu na-ekpe ikpe bụ inexcusable. N'ihi na site na nke ị na-ekpe ọzọ, unu ikpe onwe gị. N'ihi na ị na-eme otu ihe ndị ahụ ị na-ekpe.
2:2 N'ihi na anyị maara na ikpe nke Chineke bụ nke kwekọrọ n'eziokwu megide ndị na-eme ihe ndị dị otú.
2:3 Ma, O nwoke, mgbe ị na-ekpe ikpe ndị na-eme ihe ndị dị ka gị onwe gị kwa na-eme, ka i chere na ị ga-agbanahụ ikpe Chineke?
2:4 Ma ọ bụ ka ị na-eleda ịdị mma ya na ndidi na ndidi? Na unu amaghị na obiọma Chineke nke na-akpọ gị ná nchegharị?
2:5 Ma gị nke dị ike, na-impenitent obi, ị na-echekwa ọnụma maka onwe gị, rue ubọchi ọnụma na Mkpughe site dị nnọọ ikpé nke Chineke.
2:6 N'ihi na ọ ga-enye onye ọ bụla dị ka ọrụ ya:
2:7 Ndị, n'ikwekọ ndidi ezi ọrụ, na-achọ ebube na nsọpụrụ na ereghị ure, na-, ọ ga-aza ndụ ebighị ebi.
2:8 Ma ndị na-ese na-adịghị ewere ya na eziokwu, ma kama ịtụkwasị ajọ omume, ọ ga-aza ọnụma na iwe.
2:9 Mkpagbu na nhụjuanya dị n'elu mkpụrụ obi ọ bụla nke mmadụ na-arụ ọrụ ọjọọ: Ju na mbu, na kwa Grik.
2:10 Ma ebube na nsọpụrụ na udo dị maka ndị nile na-eme ihe dị mma: Ju na mbu, na kwa Grik.
2:11 N'ihi na ọ dịghị imelara na Chineke.
2:12 N'ihi na onye mehiere enweghị iwu, ga-ala n'iyi n'enweghị iwu. Na onye ọ bụla nke mehiere na iwu, ga-ekpe ikpe site n'iwu.
2:13 N'ihi na ọ bụghị ndị na-anụ iwu bụ ndị dị nnọọ n'ihu Chineke, kama ọ bụ ndị na-arụ iwu onye ga-agu n'onye ezi omume.
2:14 N'ihi na mgbe ndị mba ọzọ, ndị na-adịghị nwere iwu, sitere n'ọmụmụ ihe ndị ahụ nke bụ nke iwu, ndị dị otú ahụ, enweghị iwu, ndị a iwu onwe ha.
2:15 N'ihi na ha na-ekpughe na-arụ ọrụ nke iwu e dere n'obi ha, mgbe akọ na uche ha si sụgharịa àmà banyere ha, na echiche ha n'ime onwe ha ebubo ma ọ bụ ọbụna na-agbachitere ha,
2:16 rue mgbe Chineke ga-ekpe ikpe na-ezo ihe ndị mmadụ, site n'aka Jizọs Kraịst, dị ka m Gospel.
2:17 Ma ọ bụrụ na ị na-akpọ site aha a Jew, na i zuru ike n'elu iwu, na ị na-ahụ ebube Chineke,
2:18 na i mara uche ya, na ị na-egosipụta ihe bara uru ihe, ọ na e nyere na iwu:
2:19 ị na-obi ike n'ime onwe gị na ị bụ onye na-edu onye-ìsì, a ìhè nye ndị nọ n'ọchịchịrị,
2:20 onye nkụzi ndị nzuzu, a nkụzi na ụmụ, n'ihi na i nwere a ụdị ihe ọmụma na eziokwu na iwu.
2:21 N'ihi ya, ị na-ezi ndị ọzọ, ma unu adịghị akụziri onwe gị. Ị na-ekwusa na ndị na-ekwesịghị na-ezu ohi, ma gị onwe gị na-ezu ohi.
2:22 Ị na-ekwu okwu megide ịkwa iko, ma na-akwa iko. Ị abominate arụsị, ma ị na-akwa arụ.
2:23 Ị ga-ebube ka iwu, ma site na a nye iwu ị na-akparị Chineke.
2:24 (N'ihi na ị na aha Chineke na-ekwulu n'etiti mba, dị nnọọ ka e dere, sị.)
2:25 N'ezie, ibi úgwù bara uru, ma ọ bụrụ na ị na-edebe iwu. Ma ọ bụrụ na ị na-a raara ya nye, nke iwu, úgwù e biri gị na-aghọ, ebighị úgwù.
2:26 Ya mere, ma ọ bụrụ na ndị na-ebighị úgwù na-ikpe nke iwu, agaghi a enweghị ibi úgwù agụ dị ka ibi úgwù?
2:27 Na nke ahụ site na okike na-ebighị úgwù, ọ bụrụ na ọ na-emezu iwu, kwesịrị ọ bụghị ikpe gị ikpe, onye site na akwụkwọ ozi na site ibi úgwù bụ a raara ya nye, nke iwu?
2:28 N'ihi na a Jew bụghị onye yiri ya atugharị. Na ibi úgwù abụghị ihe nke yiri ya atugharị, ke obụkidem.
2:29 Ma a Jew bụ onye na bụ ya mere n'ime. Na obi ya úgwù bụ na mmụọ, abụghị n'akwụkwọ ozi. N'ihi ya otuto bụghị nke ndị ikom, ma nke Chineke.
Ndị Rom 3
3:1 Ya mere,, ihe ọzọ bụ onye Juu, ma ọ bụ ihe bụ uru nke ibi úgwù?
3:2 Ọtụtụ n'ụzọ ọ bụla: Na mbụ, na-, n'ihi na nkà ikwu okwu nke Chineke nyere ha.
3:3 Ma ihe ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha na-adịghị kweere? Ga-ha ekweghi-ekwe ya ghara ịdị irè okwukwe Chineke? Ka ọ ghara ịbụ otú!
3:4 N'ihi na Chineke bụ eziokwu, kama onye ọ bula di aghugho; dị nnọọ ka e dere: "Ya mere,, na ị na-agu n'onye ezi omume gị okwu, na ị ga-enwe mgbe ị na-enye ikpe. "
3:5 Ma ọ bụrụ na anyị na-ezighị ezi na-arụtụ aka ikpe ziri ezi nke Chineke, gịnị ka anyị ga-ekwu? Ọ bụ na Chineke na-adịghị mma maka ịta iwe?
3:6 (M na-ekwu mmadụ okwu.) Ka ọ ghara ịbụ otú! Ma ọ bụghị, otú Chineke ga-ekpe ikpe nke ụwa a?
3:7 N'ihi na ọ bụrụ eziokwu nke Chineke jupụtara, site na m falseness, si ebube ya, ka m ka na-ekpe ikpe dị ka ndị dị otú ahụ a mmehie?
3:8 Na anyị ekwesịghị ime ihe ọjọọ, nke mere na ezi nwere ike ime? N'ihi na otú anyị na e kwutọọ, na otú ụfọdụ ndị na-ekwu na anyị kwuru; ha ikpe dị.
3:9 Gịnị bụ ọzọ? Ànyị kwesịrị ịgbalị Excel n'ihu ha? Ọlị! N'ihi na anyị na-ebo ebubo niile Juu na ndị Grik na-n'okpuru mmehie,
3:10 dị nnọọ ka e dere: "Ọ dịghị onye bụ dị nnọọ.
3:11 Ọ dịghị onye na-aghọta. E nweghị onye na-achọ Chineke.
3:12 All kpafuru akpafu; ọnụ ha na-abaghị uru. E nweghị onye nēme ezi; e na-adịghị ọbụna otu.
3:13 Ha akpịrị bụ ihe na-emeghe n'ílì. Na ire-ha, Ha a-eme aghụghọ. Elò asps dị n'okpuru egbugbere ọnụ.
3:14 Ọnụ ha jupụtara ịbụ ọnụ na ilu.
3:15 Ụkwụ ha na-ngwa iwusi ọbara.
3:16 Iru újú na obi ụtọ, obi na-n'ụzọ ha.
3:17 Na n'ụzọ nke udo, ha na-amaghị.
3:18 E nweghị egwu Chineke n'ihu ha. "
3:19 Ma anyị maara na ihe ọ bụla iwu na-ekwu okwu, ọ na-ekwu na ndị na-na-na iwu, nke mere na ọnụ ọ bụla nke nwere ike ọnụ na uwa niile nwere ike ịbụ na isiokwu Chineke.
3:20 N'ihi na n'iru ya anụ ahụ ọ bụla a ga-agu n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu. N'ihi na ihe ọmụma nke mmehie bụ site iwu.
3:21 Ma ugbu a,, na-enweghị iwu, ikpe ziri ezi nke Chineke, nke iwu na ndi-amuma àmà, e mewo ka ọ pụta ìhè.
3:22 Na ikpe ziri ezi nke Chineke, Ọ bụ ezie na n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, bụ na ndị niile na-elekọta ihe niile ndị kweere na ya. N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche.
3:23 N'ihi na ihe niile emehiewo ma niile nọ ná mkpa nke ebube Chineke.
3:24 Anyị na-e n'onye ezi omume kpamkpam site n'amara ya site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs,
3:25 onye Chineke nyere ka a propitiation, site na okwukwe na ọbara ya, ikpughe ikpe ziri ezi ya maka mgbaghara nke mbụ mmejọ,
3:26 na site ndidi Chineke, ikpughe ikpe ziri ezi ya na oge a, nke mere na ya onwe ya nwere ike ịbụ ma ndị Naanị Otu na Justifier nke onye ọ bụla bụ nke okwukwe nke Jizọs Kraịst.
3:27 Ya mere,, ebe bụ gị onwe-mbuli elu? Ọ na-ekwe. Site na ihe iwu? Na nke ọrụ? Ọ dịghị, kama site na iwu nke okwukwe.
3:28 N'ihi na anyị ekpe mmadụ ikpe na-agu n'onye ezi omume site n'okwukwe, na-enweghị ọrụ nke iwu.
3:29 Bụ Chineke nke naanị ndị Juu na ọ bụghị nwekwara ndị Jentaịl? Na ntụle, nke mba na-.
3:30 N'ihi na otu onye bụ Chineke na-justifies ugwu site okwukwe na-ebibeghị ya úgwù site n'okwukwe.
3:31 Na-anyị na-ahụ na-ebibi iwu site n'okwukwe? Ka ọ ghara ịbụ otú! Kama, anyị na-eme iwu guzoro.
Ndị Rom 4
4:1 Ya mere,, gịnị ka anyị ga na-ekwu na Abraham Enwetawo, onye bụ nna anyị dị ka anụ ahụ?
4:2 N'ihi na ọ bụrụ Abraham n'onye ezi omume site ọrụ, ọ ga-ebube, ma ọ bụghị na Chineke.
4:3 N'ihi gịnị ka Akwụkwọ Nsọ na-ekwu? "Abram kwere Chineke, na e reputed ya si ikpe ziri ezi. "
4:4 Ma n'ihi na ọ na-arụ ọrụ, ụgwọ ọrụ na-adịghị guru dị ka amara, ma dị ka ụgwọ.
4:5 Ma n'ezie, n'ihi na onye na-adịghị arụ ọrụ, ma onye na-ekwere na ya di na impious, okwukwe ya bụ reputed si ikpe ziri ezi, dị ka nzube nke amara nke Chineke.
4:6 N'otu aka ahụ, David nwekwara n'ọnu ngọzi nke a nwoke, onye Chineke na-eweta ikpe ziri ezi na-enweghị ọrụ:
4:7 "Ngọzi na-adịrị ha onye ajọ ihe ndị a mmehie na onye e kpuchiri mmehie ha.
4:8 Gọziri agọzi bụ onye Jehova na-adịghị agu mmehie. "
4:9 A ọ na-ngọzi, mgbe ahụ, anọgide na-na na úgwù, ọ bụ ọbụna na-ebighị úgwù? N'ihi na anyị na-ekwu na okwukwe reputed ka Abraham si ikpe ziri ezi.
4:10 Ma mgbe ahụ, otú o reputed? Na úgwù ma ọ bụ na-ebibeghị ya úgwù? Ọ bụghị na ibi úgwù, ma na-ebibeghị ya úgwù.
4:11 N'ihi na ọ nara ihe iriba ama nke bu obibi ugwu ka a nnọchianya nke ikpe ziri ezi nke na okwukwe nke dị iche n'ebe ibi úgwù, ka o we buru nna nke ndị niile na-kwere mgbe ebighị úgwù, nke mere na ọ pụkwara reputed ka ha rue ikpe ziri ezi,
4:12 o we buru nna nke obibì-úgwù, bụghị naanị n'ihi na ndị na-úgwù, ma ọbụna ndị na-agbaso nzọụkwụ nke okwukwe nke bụ na-ebibeghị ya úgwù nke nna ayi Abraham.
4:13 N'ihi nkwa o kwere Abraham, na ụmụ ụmụ ya, na ya ga-eketa ụwa, bụghị site n'iwu, ma site na ikpe ziri ezi nke okwukwe.
4:14 N'ihi na ọ bụrụ ndị na-nke iwu bụ ndị nketa, mgbe okwukwe na-aghọ efu na Nkwa na-kagburu.
4:15 N'ihi na iwu na-arụ ọrụ si iwe. Na ebe e nweghị iwu, Ọ dịghị iwu na-na-agbasa.
4:16 N'ihi nke a, ọ bụ site n'okwukwe dị ka amara na Nkwa dịgidere niile ụmụ ụmụ, bụghị naanị n'ihi na ndị na-iwu, ma n'ihi na ndị na-nke okwukwe nke Abraham, onye bụ nna anyị nile n'iru Chineke,
4:17 onye o kweere, onye revives ndị nwụrụ anwụ ma na-akpọku ndị ihe na-adịghị adị dị adị. N'ihi na e dere: "M guzosie ike gị dị ka nna nke ọtụtụ mba."
4:18 O we kwere, na a olileanya na olileanya adịkwaghị, ka o wee ghọọ nna nke ọtụtụ mba, dị ka ihe e kwuru na ya: "Otú a ka gị ụmụ ụmụ ga-abụ."
4:19 Na ọ na-ebelatawo na okwukwe, ọ dịghịkwa ya tụlee ahụ nke ya na ndị nwụrụ anwụ (ezie na ọ bụ mgbe ahụ fọrọ nke nta ka otu narị afọ), ma ọ bụ n'afọ nke Sarah nwụrụ anwụ.
4:20 Ọzọkwa, na nkwa nke Chineke, ọ laghị azụ nke enweghị ntụkwasị obi, kama ọ na-ike na okwukwe, enye Chineke otuto,
4:21 maara kasị n'ụzọ zuru ezu na ihe ọ bụla Chineke kwere ná nkwa, o nwekwara ike iji mezuo.
4:22 Na n'ihi nke a, ọ na-reputed ya si ikpe ziri ezi.
4:23 Ugbu a nke a ka e dere, na a reputed ya si ikpe ziri ezi, ọ bụghị naanị n'ihi ya,
4:24 kamakwa maka anyị n'ihi. N'ihi otu ga-reputed anyị, ọ bụrụ na anyị kwere na ya na-akpọlite ​​Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ndị nwụrụ anwụ,
4:25 onye e nyefeela n'ihi mmejọ anyị, na onye bilie ọzọ n'ihi na anyị ziri ezi.
5:1 Ya mere, ebe e n'onye ezi omume site n'okwukwe, ka anyị na Chineke dị n'udo, site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
5:2 N'ihi na site na ya, anyị na-enwe ohere site n'okwukwe a amara, nke anyị na-eguzosi ike, na ebube, na olileanya nke ebube nke ụmụ Chineke.
5:3 Na ọ bụghị naanị na, ma anyị na-ahụ ebube na mkpagbu, maara na mkpagbu na-na-egosipụta ndidi,
5:4 na ndidi na-eduga ná ikwesị, ma n'ezie na-anwapụta na-eduga olileanya,
5:5 ma olileanya adịghị unfounded, n'ihi na ịhụnanya nke Chineke na-nupụta na obi anyị site na Mmụọ Nsọ, onye e nyere anyị.
5:6 Ma gịnị mere Christ, ka anyị nọ ka na-adịkwaghị ike, n'oge kwesịrị ekwesị, na-ata ahụhụ ọnwụ maka na impious?
5:7 Ugbu a, mmadụ pụrụ sonso ịdị njikere ịnwụ n'ihi nke ikpe ziri ezi, ọmụmaatụ, ikekwe mmadụ pụrụ amaja na-anwụ anwụ n'ihi ezi mmadụ.
5:8 Ma Chineke na-egosi anyị ịhụnanya ya na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, n'oge kwesịrị ekwesị,
5:9 Kraịst nwụrụ n'ihi anyị. Ya mere, ọ na e n'onye ezi omume ugbu a site n'ọbara ya, otú ahụ karị, ga-azọpụta anyị n'ọnụma site na ya.
5:10 N'ihi na ọ bụrụ na anyị na-Chineke dịghachi ná mma site n'ọnwụ Ọkpara ya, ka anyị nọ ka ndị iro, otú ahụ karị,, ọ na e ná mma, ga-azọpụta anyị site ná ndụ ya.
5:11 Na ọ bụghị naanị na, ma anyị na-ebube n'ime Chineke site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, site onye anyị ugbu a ná mma.
5:12 Ya mere, dị nnọọ ka mmehie sitere n'otu mmadụ bata n'ụwa a, na site na mmehie, ọnwụ; otú a kwa ka ọnwụ e zigara ka mmadụ niile, ndị niile na-emehiewo.
5:13 N'ihi na ọbụna tupu iwu, na mmehie dị n'ụwa, ma mmehie ahụ agu mgbe iwu adịghị.
5:14 Ma ọnwụ chịrị site na Adam ruo mgbe Moses, ọbụna ndị na-emehiewo, na oyiyi nke njehie nke Adam, onye bụ a ọnụ ọgụgụ nke ya bụ onye na-abịa.
5:15 Ma onyinye nke bụ kpamkpam dị ka iwe. N'ihi na ọ na-akpasu iwe nke onye, ọtụtụ mmadụ nwụrụ, ma karị, site n'amara nke otu onye, Jesu Kristi, nwere amara na onyinye Chineke ọtụtụ ọtụtụ.
5:16 Na mmehie site na otu bụ kpamkpam dị ka onyinye. N'ihi na-, ikpe nke onye we ikpe, ma amara n'ebe ọtụtụ mmejọ bụ si ziri ezi.
5:17 n'ihi na ọ, site na otu iwe, ọnwụ chịrị site na otu, ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere ga ndị na-enweta ihe n'ụba nke amara, ma nke onyinye na nke ikpe ziri ezi, ịchị ndụ site n'aka otu Jesus Christ.
5:18 Ya mere, dị nnọọ ka site na iwe nke onye, madu nile we da n'okpuru ikpe, otú a kwa site na ikpe ziri ezi nke otu, madu nile-ada n'okpuru ziri ezi nye na ndu.
5:19 N'ihi na, dị nnọọ ka site ná nnupụisi nke otu onye, ọtụtụ e dị ka mmehie, otú a kwa site ná nrubeisi nke otu onye, ọtụtụ ga-guzobere dị ka nanị.
5:20 Ugbu a iwu banyere ndị dị otú ahụ n'ụzọ na-mmejọ ga jupụta. Ma ebe mmejọ ndị ukwuu, amara bụ superabundant.
5:21 Ya mere,, dị nnọọ ka mmehie akara ruo ọnwụ, otú a kwa nwere ike amara eze site ikpe ziri ezi si ndụ ebighi ebi, site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.
Ndị Rom 6
6:1 Ya mere, ihe anyị ga-ekwu? Ka anyị kwesịrị ịnọgide na-eme mmehie, nke mere na amara we rie nne?
6:2 Ka ọ ghara ịbụ otú! N'ihi na olee otú anyị ndị nwụrụ mehie ka ndụ na mmehie?
6:3 Na unu amaghị na ndị nke anyị bụ ndị e mere baptizim n'ime Kraịst Jizọs e mere baptizim baa na ọnwụ ya?
6:4 N'ihi na site na baptism anyị na e liri ya na ya n'ime ọnwụ, ka ọ were, na n'ụzọ na-Christ si n'ọnwụ bilie, site n'ebube nke Nna, otú ahụ nwere ike anyị na-eje ije na newness nke ndụ.
6:5 N'ihi na ọ bụrụ na anyị anọwo na kụrụ ọnụ, na n'ọdịdị nke ọnwụ ya, otú a ka anyị na-enwe, n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya.
6:6 N'ihi na anyị maara nke a: na anyị mbụ selves e kpogidere ọnụ na ya, nke mere na ahụ nke bụ nke mmehie nwere ike a ga-ebibi, na mmata, nke mere na anyị nwere ike ọ gaghịzi na-eje ozi mmehie.
6:7 N'ihi na ọ bụ onye nwụrụ e n'onye ezi omume site na mmehie.
6:8 Ugbu a ma ọ bụrụ na anyị nwụrụ na Kraịst, anyị kwere na anyị na ya ga-adịkọkwa ndụ na Kraịst.
6:9 N'ihi na anyị maara na Kraịst, na ebili n'aka ndị nwụrụ anwụ, ike agaghịkwa anwụ: ọnwụ agaghịkwa nwere n'aru ya.
6:10 N'ihi na dị ukwuu dị ka ọ nwụọ n'ihi mmehie, Ọ nwuru nání otù. Ma dị ukwuu dị ka ọ dị ndụ, o bi n'ihi na Chineke.
6:11 Ya mere, i kwesịrị ịtụle onwe unu ná ndị na-nwuru n'ebe nmehie, na ga-ebi n'ihi na Chineke na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.
6:12 Ya mere, ka mmehie achị gị nke pụrụ ịnwụ anwụ, ndị dị otú ahụ na ị ga-erube isi ya ọchịchọ.
6:13 Ma ọ ga-ị na-enye ndị akụkụ ahụ gị dị ka ngwá nke ajọ omume nke mmehie. Kama, na-enye onwe unu Chineke, dị ka ma ọ bụrụ na ị na-ebi mgbe ọnwụ, na-enye akụkụ ahụ gị dị ka ngwá nke ikpe ziri ezi n'ihi na Chineke.
6:14 N'ihi na mmehie agaghị nwere n'aru ị. N'ihi na ị bụghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara.
6:15 Gịnị bụ ọzọ? Ka anyị kwesịrị mmehie n'ihi na anyị anọghị n'okpuru iwu, kama n'okpuru amara? Ka ọ ghara ịbụ otú!
6:16 Na unu amaghị na onye ị na-àjà onwe-unu dị ka ndị ohu n'okpuru? Ị bụ ndị ohu onye ọ bụla ị na-erube isi: ma obu nke mmehie, ruo ọnwụ, ma ọ bụ nke nrubeisi, si ikpe ziri ezi.
6:17 Ma ekele dịrị Chineke na, ezie na ị na-eji ndi-orù nke nmehie, ugbu a ị nọwo na-erube isi site n'obi na nnọọ ụdị ozizi ahụ i a natara.
6:18 Na ọ na e ohu mmehie, anyị ghọọ ndị ohu ikpe ziri ezi.
6:19 M na-ekwu okwu ụmụ mmadụ ji n'ihi na nke nsogbu ahụ ike nke anụ ahụ gị. N'ihi na dị ka ị na-awa akụkụ ahụ gị na-eje ozi adịghị ọcha na ajọ omume, n'ihi ajọ omume, otú a kwa ka unu ugbu a amịghịkwa na akụkụ ahụ gị na-eje ozi ikpe ziri ezi, n'ihi nsọ.
6:20 N'ihi na ọ nwere mgbe unu na ndị na-ejere mmehie, ị ghọọ ụmụ ikpe ziri ezi.
6:21 Ma ihe mkpụrụ mere na ị jide n'oge ahụ, na ihe ndị ahụ banyere nke ugbu a unu bụ ihere? Maka njedebe nke ihe ndị bụ ọnwụ.
6:22 Ma n'ezie, ebe a tọhapụrụ ugbu a site na mmehie, na ebe e mere ohu Chineke, ị jide mkpụrụ gị nsọ, na n'ezie na ọgwụgwụ ya bụ ndụ ebighi ebi.
6:23 N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ. Ma onyinye-amara nke Chineke bụ ndụ ebighi ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.
Ndị Rom 7
7:1 Ma ọ bụ na unu amaghị, ụmụnna, (ugbu a m na-ekwu ndị maara iwu) na iwu onye na-enwe a onye naanị ya ogologo dị ka ọ dị ndụ?
7:2 Ọmụmaatụ, a nwaanyị nke bụ isiokwu a di obiomo site iwu mgbe ya na di ya ndụ. Ma mgbe ya na di ya nwụrụ, ọ na-ahapụ iwu nke di ya.
7:3 Ya mere, mgbe ya na di ya dị ndụ, ma ọ bụrụ na ọ nọwo na nwoke ọzọ, ọ ga-akpọ onye na-akwa iko. Ma mgbe ya na di ya nwụrụ, ọ na-enwere onwe ha pụọ ​​iwu nke di ya, dị otú ahụ na, ma ọ bụrụ na ọ nọwo na nwoke ọzọ, ọ bụghị nwaanyị na-akwa iko.
7:4 Ya mere, ụmụnna m, ị na-abụkwa nwụrụ anwụ ka iwu, site n'ahụ Kraịst, nke mere na i nwere ike ịbụ onye ọzọ bilitere site na ndị nwụrụ anwụ, na ka anyị wee na-amị mkpụrụ n'ihi na Chineke.
7:5 N'ihi na mgbe anyị nọ na-aru, na agụụ mmekọahụ nke mmehie, nke nọ n'okpuru iwu, ejikwara n'ime anyị na ozu, ka na-amị mkpụrụ ruo ọnwụ.
7:6 Ma ugbu a, anyị bụ ndị a tọhapụrụ iwu nke ọnwụ, nke anyị na-na-e, nke mere na ugbu a, anyị nwere ike na-eje ozi na a ọhụrụ spirit, na bụghị na ochie, site n'akwụkwọ ozi.
7:7 Gịnị ka anyị kwesịrị ọzọ? Bụ iwu mmehie? Ka ọ ghara ịbụ otú! Ma m na-amaghị mmehie, ma ọ bụghị site n'iwu. Ọmụmaatụ, M ga-mara banyere inwe anyaukwu n'ebe, ma ọ bụrụ na iwu kwuru: "Ị gaghị anyaukwu."
7:8 ma na nmehie, anata ohere site n'iwu, zọputa na m niile n'ụzọ nke anyaukwu. N'ihi na iche si n'iwu, mmehie nwụrụ anwụ.
7:9 Ugbu a, m biri ruo oge ụfọdụ iche si n'iwu. Ma mgbe iwu rutere, mmehie e agbakee,
7:10 na m nwụrụ. Na ihe enyere n'iwu, nke bụ nye na ndu, E onwe ya hụrụ na-ruo ọnwụ m.
7:11 n'ihi na ya, anata ohere site n'iwu, rafuru m, na, site na iwu, mmehie gburu m.
7:12 Ya mere, iwu ahụ n'onwe ya bụ n'ezie nsọ, na ihe enyere n'iwu, ihe nsọ na dị nnọọ na mma.
7:13 Mgbe ahụ bụ ihe a na-ezi ka ọ ghọọ ọnwụ maka na m? Ka ọ ghara ịbụ otú! Ma kama mmehie, ka o wee mara ka mmehie site ezi ihe, aluworo ọnwụ na m; nke mere na mmehie, site n'iwu, wee ghọọ ndị mmehie enweghị atụ.
7:14 N'ihi na anyị maara na Iwu ahụ bụ ihe ime mmụọ. Ma m bụkwanụ, ọ na e rere ịnọ n'okpuru mmehie.
7:15 N'ihi na m na-eme ihe na m na-adịghị aghọta. N'ihi na m na-adịghị eme ihe ọma m na-achọ ime. Ma ihe ọjọọ na m kpọrọ asị ka m na-eme.
7:16 Ya mere, mgbe m na-eme ihe m na-achọghị ime, M kwenyere na iwu, na iwu ezi.
7:17 Ma m na-ahụ na-eme bụghị dị ka iwu, ma dị ka mmehie nke bi n'ime m.
7:18 N'ihi na m maara na ihe ọma ọ dịghị ebi n'ime m, nke ahụ bụ, n'ime anụ ahụ m. N'ihi na njikere ime ihe ọma dabeere nso m, ma mmezu nke na ezi, M nwere ike ghara iru.
7:19 N'ihi na m na-adịghị eme ihe ọma m na-achọ ime. Ma kama, M na-eme ihe ọjọọ nke m na-achọghị ime.
7:20 Ugbu a ma ọ bụrụ na m na-eme ihe m na-adịghị njikere ime, ọ bụ agaghịkwa bụ mụ onwe m na-eme ya, kama ọ bụ mmehie nke bi n'ime m.
7:21 Ya mere, M na-achọpụta iwu, site chọrọ ime ihe ọma n'ime onwe m, ezie ọjọ idu nso n'akụkụ m.
7:22 N'ihi na abụ m obi ụtọ na iwu Chineke na-, dị ka mmadụ ime.
7:23 Ma ana m aghọta iwu ọzọ n'ime ahụ m, alụ ọgụ megide iwu nke uche m, na-adọrọ m na iwu nke mmehie nke dị na ahụ m.
7:24 Enweghị obi ụtọ nwoke na mụ onwe m, bụ ndị ga-onwe m site na nke a aru nke ọnwụ?
7:25 Amara nke Chineke, site Jizọs Kraịst Onyenwe anyị! Ya mere, M na-eje ozi, iwu Chineke na onwe m n'uche; ma na anụ, iwu nke mmehie.
8:1 Ya mere, e nwere ugbu a, ọ dịghị ikpe ndị bụ ndị na Kraịst Jizọs, ndị na-adịghị eje ije dị ka anụ ahụ.
8:2 N'ihi na iwu nke Mọ nke ndụ na Kraịst Jizọs emewo m nwere onwe m si n'iwu nke mmehie na ọnwụ.
8:3 N'ihi na ezie na nke a agaghị ekwe omume n'okpuru iwu, n'ihi na ọ bụ ebelatawo site n'anụ ahụ, Chineke zitere Ọkpara ya na oyiyi nke anu aru nke nmehie na n'ihi mmehie, iji ikpe mmehie na anụ ahụ,
8:4 nke mere na ziri ezi nke iwu wee mezuo n'ime anyị. N'ihi na anyị na-adịghị eje ije dị ka anụ ahụ, ma dị ka mmụọ.
8:5 N'ihi na ndị na na nkwekọrịta anụ ahụ echeta ihe nke anụ ahụ. Ma ndị na-na nkwekọrịta mmụọ bụ echeta ihe nke mmụọ.
8:6 N'ihi na akọ nke anụ ahụ bụ ọnwụ. Ma amamihe nke mmụọ ahụ bụ ndụ na udo.
8:7 Na amamihe nke anụ ahụ dị inimical Chineke. N'ihi na ọ bụghị n'okpuru iwu nke Chineke, ma ọ bụ ọ pụrụ.
8:8 Ya mere, ndị bụ n'anụ ahụ na-adịghị ike-atọ Chineke ụtọ.
8:9 Na ị na-adịghị na anụ ahụ, ma na mmụọ, ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na Mọ nke Chineke ndụ n'ime gị. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla enweghị Mọ nke Kraịst, ọ dịghị nke ya.
8:10 Ma ọ bụrụ na Kraịst bụ n'ime gị, mgbe ahụ ahụ bụ n'ezie nwụrụ anwụ, banyere mmehie, ma mmụọ n'ezie ndụ, n'ihi ziri ezi.
8:11 Ma ọ bụrụ na Mmụọ nke na-enye kpọlite ​​Jizọs n'ọnwụ ndụ n'ime gị, mgbe ahụ, ọ bụ onye zụlitere elu Jizọs Kraịst na ndị nwụrụ anwụ ga-enliven gị ịnwụ anwụ, site n'aka ndị ya Mmụọ bi n'ime gị.
8:12 Ya mere, ụmụnna, anyị na-adịghị ụgwọ ka anụ ahụ, ka na-ebi ndụ dị ka anụ ahụ.
8:13 N'ihi na ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ dị ka anụ ahụ, ị ga-anwụ. Ma ọ bụrụ na, site na Mọ Nsọ, ị mortify omume ndị anụ ahụ, ị ga-adị ndụ.
8:14 N'ihi na ndị niile na-edu Mọ nke Chineke bụ ụmụ ndị ikom Chineke.
8:15 Na ị adịghị natara, ọzọ, a mmụọ nke ohu na-atụ egwu, ma ị natara Mọ nke doo nke ụmụ, na onye anyị na-eti mkpu: "Aba, Nna!"
8:16 N'ihi na mmụọ nsọ onwe ya sụgharịa akaebe mmụọ anyị na anyị bụ ndị ụmụ Chineke.
8:17 Ma ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ, mgbe ahụ, anyị bụkwa ndị nketa: na-nketa nke Chineke, kamakwa ngalaba-nketa na Kraịst, ma ndị dị otú ahụ n'ụzọ na-, ọ bụrụ na anyị na-ata ahụhụ na ya, anyị ga-otuto na ya.
8:18 N'ihi na m na-atụle ya na ahụhụ nke oge a na-adịghị eru ka e jiri ya tụnyere na-eme n'ọdịnihu ebube nke a ga-ekpughe n'ebe anyị nọ.
8:19 N'ihi na atụmanya nke e kere eke anya mkpughe nke ụmụ Chineke.
8:20 N'ihi na e kere eke e mere isiokwu na-efu, bụghị ọchịchọ obi, ma n'ihi nke Onye mere ka ọ isiokwu, si olileanya.
8:21 N'ihi na e kere eke onwe ya ga na-napụtakwara n'agbụ nke ire ure, n'ime nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke.
8:22 N'ihi na anyị maara na bụla e kere eke bụdị iwu n'ime, dị ka ma ọ bụrụ na-amụ nwa, ọbụna ruo ugbu a;
8:23 na ọ bụghị naanị ndị a, kamakwa onwe anyị, ebe anyị jide akpa-mkpụrụ nke mmụọ nsọ. N'ihi na anyị na-asụ ude n'ime onwe anyị, Mfịn anyị doro dị ka ụmụ Chineke, na ngbaputa nke aru ayi.
8:24 N'ihi na anyị e azọpụta site olileanya. Ma a olileanya nke a na-ahụ anya abụghị olileanya. N'ihi na mgbe mmadụ na-ahụ ihe, gịnị mere ọ ga na-atụ anya?
8:25 Ma ebe ọ bụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na-adịghị ahụ, anyị na-echere na ndidi.
8:26 Na N'otu aka ahụ, Mọ-enyere anyị adịghị ike. N'ihi na anyị amaghị otú e si ekpe ekpere ka anyị kwesịrị, kama Mmụọ onwe ya jụrụ na nnọchite anyị na ineffable ize ume.
8:27 Ọ na-enyocha obi maara ihe Mọ Nsọ na-achọ, n'ihi na ọ na-ajụ na nnọchite nke ndị nsọ dị na Chineke.
8:28 Na anyị maara na, maka ndị hụrụ Chineke n'anya, ihe niile na-arụ ọrụ ọnụ si ezi, maka ndị na-, dị na nzube ya, na-kpọrọ ịbụ ndị nsọ.
8:29 N'ihi na ndị na onye ọ buru uzọ mara, ọ na-predestinated, ime na onyinyo nke Ọkpara ya, nke mere na o nwere ike ịbụ ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnna.
8:30 Na ndị ahụ ọ predestinated, Ọ na-akpọ. Na ndị bụ ndị ọ kpọrọ, ọ na-agu n'onye ezi omume. Na ndị ahụ ọ agu n'onye ezi omume, o otuto.
8:31 Ya mere, gịnị ka anyị kwesịrị ikwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke bụ n'ihi na anyị, onye bụ megide anyị?
8:32 Ọ na-adịghị egbughị ọbụna nwa nke ya, ma nyefee ya n'aka ya n'ihi anyị niile, Olee otú ọ pụrụ kwa, na ya, nyere anyị ihe niile?
8:33 Ònye ga-eme ka-nmegide imegide ndi Chineke hoputara? Bụ Chineke bụ Onye na-justifies;
8:34 onye bụ onye na-akatọ? Kraịst Jizọs onye nwụrụ, na onye n'ezie bilitere ọzọ, bụ na n'aka nri nke Chineke, na ọbụna ugbu a, ọ intercedes anyị.
8:35 Mgbe ahụ Ònye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst? Mkpagbu? Ma ọ bụ ihe mgbu? Ma ọ bụ ụnwụ? Ma ọ bụ ọtọ? Ma ọ bụ nsogbu? Ma ọ bụ mkpagbu? Ma ọ bụ mma-agha?
8:36 N'ihi na ọ bụ dị ka ọ na e dere: "N'ihi na gị n'ihi, anyị na-na-egbu ogologo ụbọchị dum. Anyị na-na-emeso dị ka atụrụ-egbu ya. "
8:37 Ma na a niile, anyị imeri, n'ihi ya onye hụrụ anyị n'anya.
8:38 N'ihi na abụ m ụfọdụ na ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ mmụọ ozi, ma ọ bụ principalities, Ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ndị dị ugbu a, ma ọ bụ n'ọdịnihu ihe, ma ọ bụ ike,
8:39 ma ọ bụ ndị dị elu, ma ọ bụ ogbu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ kere ihe, ga-enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke, nke dị na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.
Ndị Rom 9
9:1 M na-ekwu eziokwu na Kraịst; Adịghị m dina. Akọ na uche m na-enye na-agba akaebe m na Mmụọ Nsọ,
9:2 n'ihi na mwute n'ime m dị ukwuu, na e nwere na-aga n'ihu mwute na obi m.
9:3 N'ihi na m nọ na-achọ na mụ onwe m nwere ike na-anathemized si Christ, n'ihi ụmụnna m, bụ ndị m umu-nne-dị ka anụ ahụ.
9:4 Ndị a bụ ụmụ Izrel, onye bụ nke doro dị ka ụmụ, na otuto na agba, na-enye ihe na-esonụ nke iwu, na nkwa.
9:5 Ha bụ nna, ma site na ha, dị ka anụ ahụ, bụ Kraịst, onye bụ isi ihe niile, gọzie Chineke, mgbe nile ebighị ebi. Amen.
9:6 Ma ọ bụghị na Okwu Chineke alawo n'iyi. N'ihi na ọ bụghị ndị niile ndị bụ ụmụ Izrel na-nke Israel.
9:7 Ma ọ bụghị niile bụ ụmụ bụ mkpụrụ nke Abraham: "N'ihi na gị na mkpụrụ gị ga-akpọku Isaac."
9:8 Yabụ, ndị bụ ụmụ Chineke na-adịghị ndị bụ ụmụ nke anụ ahụ, ma ndị bụ ụmụ nke ndị na Nkwa; ndị a na-ahụta ka ụmụ.
9:9 N'ihi na okwu nke nkwa bụ ihe a: "M ga-alaghachi n'oge kwesịrị ekwesị. Ma ọ gaghi-a nwa Sarah. "
9:10 Na na ọ bụ naanị. N'ihi Rebecca nwekwara, ọ we turu ime site Isaac nna anyị, si n'otu omume,
9:11 mgbe ụmụaka na-erubeghị na a mụrụ, na-erubeghị na mere ihe ọ bụla dị mma ma ọ dị njọ (ndị dị otú ahụ na nzube Chineke nwere ike dabere na ha na-ahọrọ),
9:12 na ọ bụghị n'ihi na nke omume, ma n'ihi a ọkpụkpọ, a gwara ya: "The-okenye gēfè nke-ntà."
9:13 Ya mere, nakwa na ọ na e dere: "M hụrụ Jekọb n'anya, ma m asị Esau. "
9:14 Gịnị ka anyị kwesịrị ọzọ? Ọ bụ n'ebe ahụ unfairness na Chineke? Ka ọ ghara ịbụ otú!
9:15 N'ihi na Moses ọ na-ekwu: "M ga-emere onye ọ bụla m ọmịiko. Na m ga-enye ebere bụkwa onye ọ bụla m ga-ọmịiko. "
9:16 Ya mere, ọ na-adịghị dabere na ndị na-ahọrọ, ma ọ bụ na ndị na-Excel, kama na Chineke onye na-ewe ihe nwute.
9:17 N'ihi na Akwụkwọ Nsọ kwuru sị na Fero: "M akpọlite ​​gị elu n'ihi nzube a, ka m wee na-ekpughe m ike site ị, na nke mere na m aha nwere ike na-mara ọkwa na ụwa nile. "
9:18 Ya mere, ọ na-ewe ihe nwute na onye ọ bụla ọ chọrọ, o siri ike onye ọ bụla ọ chọrọ.
9:19 Ya mere, ị ga-asị m: "Gịnịzi mere o ji ahụta mmejọ? N'ihi na onye nwere ike imeri ya?"
9:20 O nwoke, onye ị na-na-ajụ Chineke? Olee otú ihe a kpụrụ asị Onye kpụrụ ya: "Gịnị mere i mere m otú a?"
9:21 Na anaghị ọkpụite nwere ikike n'ebe ụrọ mee, si otu ihe, n'ezie, otu arịa si nsọpụrụ, ma n'ezie ọzọ si ihere?
9:22 Gịnị ma ọ bụrụ na Chineke, chọrọ ekpughe ọnụma ya na ime ka a mara ike ya, diri, na ukwuu ndidi, arịa kwesịrị iwe, kwesịrị ekwesị ka e bibie,
9:23 ka o wee na-ekpughe na akụ na ụba nke ebube ya, n'ime ndị a arịa ndị dịịrị ebere, nke o doziri si ekele?
9:24 N'ihi ya, ọ bụ na ndị nke anyị bụ onye ọ na-akpọ, ọ bụghị naanị site n'etiti ndị Juu, ma ọbụna site n'etiti ndị mba ọzọ,
9:25 dị nnọọ ka ọ na-ekwu na Hosea: "M ga-akpọ ndị na-abụghị ndị m ndị mmadụ, 'Ndị m,'Na ọ na-adịghị hụrụ n'anya, 'hụrụ n'anya,'Na ọ bụ onye na-enwetara ebere, 'Onye nwetara ebere.'
9:26 Nka gābu-kwa: na ebe e si ha, 'Unu abụghị ndị m,,'N'ebe ahụ ka ha ga-akpọ ụmụ ndị ikom nke Chineke dị ndụ. "
9:27 Aịzaya tikuru na nnọchite nke Israel: "Mgbe ọnụ ọgụgụ ụmụ nke Israel dị ka ájá nke oké osimiri, a fọduru ka agāzọputa.
9:28 N'ihi na ọ ga-mezue okwu ya, mgbe abbreviating ya nke hara nhatanha. N'ihi na Jehova ga-emezu a nkenke okwu n'elu ụwa. "
9:29 Ma ọ bụ dị nnọọ ka Aịsaịa buru amụma: "Ọ bụrụ na Jehova nke usu nile nke ndi ama nyere ụmụ, anyị ga-adị ka Sọdọm, na anyị ga-e mere yiri Gọmọra. "
9:30 Gịnị ka anyị kwesịrị ọzọ? Na ndị Jentaịl na-emeghị ihe ikpe ziri ezi-emezuworị ikpe ziri ezi, ọbụna ikpe ziri ezi na bụ nke okwukwe.
9:31 Ma n'ezie, Israel, ezie na na-esonụ iwu nke ikpe ziri ezi, adịghị rutere iwu nke ikpe ziri ezi.
9:32 Gịnị bụ ihe a? N'ihi na ha na-achọ ya site na okwukwe, ma dị ka ọ bụ site na ọrụ. N'ihi na ha na-asụ ngọngọ n'elu a ịsụ ngọngọ,
9:33 dị nnọọ ka e dere: "Lee, M na ịtụkwasị a ịsụ ngọngọ na Zayọn, na oké nkume asịrị. Ma onye ọ bụla nke kwere na ya ga-ihere. "
Ndị Rom 10
10:1 Brothers, N'ezie uche nke obi m, na m Chineke ekpere, bụ n'ihi na ha rue nzoputa.
10:2 N'ihi na m na-enye ha àmà, na ha nwere a ịnụ ọkụ n'obi maka Chineke, ma ọ bụghị dị ka ihe ọmụma.
10:3 N'ihi na, ha amaghị nke ikpe ziri ezi nke Chineke, na-achọ ka ha guzosie ike ikpe ziri ezi, ha doro onwe-ha ikpe ziri ezi nke Chineke.
10:4 N'ihi na ọgwụgwụ nke iwu, Christ, bụ rue ikpe ziri ezi ndị nile kwere.
10:5 Na Moses dere, banyere ikpe ziri ezi na bụ nke iwu, na na onye na-mere ikpe ziri ezi ga-adị ndụ site na ikpe ziri ezi.
10:6 Ma ikpe ziri ezi na bụ nke okwukwe na-ekwu okwu n'ụzọ dị otú a: Unu na-ekwu na obi gị: "Ònye ga-arịgo n'eluigwe?" (nke ahụ bụ, ịga kpọdata Kraịst);
10:7 "Ma ọ bụ onye ga-arịda n'abis?" (nke ahụ bụ, na-akpọ azụ Kraist si na ndị nwụrụ anwụ).
10:8 Ma gịnị ka Akwụkwọ Nsọ na-ekwu? "Okwu ahụ dị nso, n'ọnụ gị nakwa n'obi gị. "Nke a bụ okwu nke okwukwe, nke anyị na-ekwusa ozi ọma.
10:9 N'ihi na ọ bụrụ na ị na-ekwupụtara na ọnụ gị Onyenwe anyị Jizọs, ma ọ bụrụ na i kwere na obi gị na Chineke mere ka ya na ndị nwụrụ anwụ, ị ga-azọpụta.
10:10 N'ihi na obi, anyị kweere si ikpe ziri ezi; ma ọnụ, nkwupụta bụ rue nzoputa.
10:11 N'ihi na Akwụkwọ Nsọ kwuru: "All ndị kwere na ya ga-ihere."
10:12 N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik. N'ihi na otu Onyenwe bụ isi ihe niile, n'ụba niile na-akpọku ya.
10:13 N'ihi na ndị niile na-akpọ n'elu aha Jehova ga-azọpụta.
10:14 Mgbe ahụ n'ụzọ dị aṅaa ga-ndị na-kweere na ya na-akpọku ya? Ma ọ bụ n'ụzọ dị aṅaa ga-ndị na-anụbeghị banyere ya kwere na ya? Na n'ụzọ dị aṅaa ka ha ga-anụ nke ya na-enweghị ozi ọma?
10:15 Na n'ezie, n'ụzọ dị aṅaa ga-ha na-ekwusa, ọ gwụla ma ha e zitere, dị nnọọ ka e dere: "Olee otú mara mma, bụ ụkwụ nke ndị na-agbasa ozi ọma udo, nke ndị na-agbasa ozi ọma ezi ihe!"
10:16 Ma ọ bụghị ihe niile na-erube isi Oziọma. N'ihi na Aịzaya sịrị: "Onyenwe anyị, onye kweere anyị akụkọ?"
10:17 Ya mere, okwukwe bụ ịnụ, na-anụ bụ site Okwu nke Kraịst.
10:18 Ma m na-ekwu: Na ọ bụghị ha nụrụ? N'ihi na-: "Ụda ha na-arahụ pụta ahụ n'ụwa nile, na okwu ha si ókè nke ụwa dum. "
10:19 Ma m na-ekwu: Ọ Israel amaghị? Mbụ, Moses kwuru: "M ga-eduga gị n'ime a ịma aka ndị na-abụghị mba; n'etiti mba nzuzu, M ga-ezitere gị n'ime ọnụma. "
10:20 Aịzaya-anwa anwa ikwu: "M chọpụtara na ndị na-adịghị achọ m. M pụtara n'ihu ọha ndị na-adịghị na-arịọ m banyere m. "
10:21 Mgbe ahụ ka Israel ọ na-ekwu: "Ogologo ụbọchị nile m setịrị aka m ka a ndị na-adịghị kwere na onye na-emegide m."
Ndị Rom 11
11:1 Ya mere, M na-ekwu: Ka Chineke chụpụrụ ndị ya? Ka ọ ghara ịbụ otú! N'ihi na m, kwa, m onye Izrel nke mkpụrụ Abraham, si n'ebo Benjamin.
11:2 Chineke chụpụrụ ndị ya, onye ọ buru uzọ mara. Na unu amaghị ihe Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Elijah, otú ọ na-akpọ Chineke megide Israel?
11:3 "Onyenwe anyị, ha gburu gị Amụma. Ha kagburu gị ebe ịchụàjà. Na naanị m anọgide, na ha na-achọ ná ndụ m. "
11:4 Ma ihe bụ Divine omume ya? "M na-edebe onwe m asaa puku ndị ikom, ndị na-kpudo ha ikpere n'iru Beal. "
11:5 Ya mere, ke otu ụzọ, ọzọ a oge, e nwere a fọdụrụnụ e zọpụta dị na oke nke amara.
11:6 Ma ọ bụrụ na ọ bụ amara, mgbe ahụ, ọ bụghị ugbu a site n'ọrụ; ma amara bụ agaghịkwa free.
11:7 Gịnị bụ ọzọ? Gịnị Israel nọ na-achọ, ọ nwetara. Ma hoputara nwere nwetara ya. Na n'ezie, ndị a ndị ọzọ e kpuo ìsì,
11:8 dị nnọọ ka e dere: "Chineke nyere ha mọ nke ekweghiekwe: anya nke na-adịghị aghọta, na ntị na-adịghị na-anụ, ọbụna ruo taa. "
11:9 Devid kwuru: "Ka ha table-adị ka a ọnyà, na a aghụghọ, na a asịrị, na a mmehie ha.
11:10 Ka anya-ha ndị amabughị, nke mere na ha nwere ike ghara ịhụ, na nke mere na ha na-akpọrọ isiala ha Akwadoo mgbe niile. "
11:11 Ya mere, M na-ekwu: Ha sụọ ngọngọ n'ụzọ dị otú ahụ na ha ga-ada? Ka ọ ghara ịbụ otú! Kama, ha iwe, nzọpụta bụ ndị Jentaịl, nke mere na ha nwere ike ịbụ onye na-ama na ha.
11:12 Ugbu a ma ọ bụrụ na ha iwe iwe bụ akụ nke ụwa, na ọ bụrụ na ha diminution bụ akụ nke ndị mba ọzọ, otú ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ na ha na njuputa?
11:13 N'ihi na asị m unu ndi mba ọzọ: N'ezie, dị ka ogologo dị ka m onyeozi nke ndị mba ọzọ, M ga-akwanyere ùgwù ozi m,
11:14 n'ụzọ dị otú ahụ ka m wee kpasuo na ịma aka ndị na-anụ ahụ m, na ka m wee zọpụta ụfọdụ n'ime ha.
11:15 N'ihi na ọ bụrụ ọnwụ ha bụ maka idozi nke ụwa, ihe nwere ike ha laghachiri-abụ maka, ma e wezụga ndụ ha n'ọnwụ?
11:16 N'ihi na ọ bụrụ na nkpuru mbu e doro nsọ, otú a kwa nwere dum. Ma ọ bụrụ na mgbọrọgwụ dị nsọ, otú a kwa bụ alaka.
11:17 Ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime alaka-agbajikwa, na ọ bụrụ na ị, ịbụ a alaka olive ọhịa, na-anyadokwa na ha, na ị na-a partaker nke mgbọrọgwụ na nke ima-abuba nke osisi olive,
11:18 adịghị ekele onwe gị n'elu alaka. N'ihi na ọ na ị na ebube, ị na-akwado na-akpata, ma mgbọrọgwụ na-akwado gị.
11:19 Ya mere, ị ga-asị: Alaka na-agbajikwa apụ, nke mere na m nwere ike na-anyadokwa on.
11:20 ọma. Ha na-agbajikwa apụ n'ihi na nka. Ma ị na-eguzo na okwukwe. N'ihi ya, anaghị na-ahọrọ na-esi ísì ihe dị elu, ma kama na-atụ egwu.
11:21 N'ihi na ọ bụrụ na Chineke na-adịghị chebere eke alaka, ikekwe o wee ghara zọọ unu.
11:22 Ya mere,, achọpụta na ịdị mma na ogo nke Chineke. N'ezie, n'ebe ndị dara, e ogo; ma n'ebe ị, e nwere ịdị mma nke Chineke, ma ọ bụrụ na unu anọgide na ịdị mma. Ma ọ bụghị, ị ga-ebipụ.
11:23 Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ha na-adịghị anọgide na ekweghi-ekwe, ha ga-anyadokwa on. N'ihi na Chineke nwere ike ịnyado ha na ọzọ.
11:24 Ya mere ọ bụrụ na ị na-ebipụ anụ osisi olive, nke bụ eke na ị, na, n'ụzọ megidere okike, na ị na-anyadokwa na ezi osisi olive, otú ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-ndị na-eke alaka ga-anyadokwa na ha n'osisi oliv nke?
11:25 N'ihi na m na-achọghị ka unu ghara ịma, ụmụnna, omimi a (ka i ghara iyi ihe amamihe dị na naanị onwe-unu) na a na-ìsì ka mere na Israel, ruo mgbe izu ezu nke ndị mba ọzọ eruwo.
11:26 Na n'ụzọ dị otú a, niile nke Israel wee zọpụta, dị nnọọ ka e dere: "Site Zion ga-abata na onye na-anapụta, ọ ga-atụgharị enweghị nsọpụrụ si n'ebe Jekọb.
11:27 Nke a ga-ọgbụgba ndụ m maka ha, mgbe m ga-ewerekwa ha mmehie ha. "
11:28 N'ezie, dị ka Gospel, ha bụ ndị iro n'ihi unu. Ma dị ka nhoputa, ha kasị hụrụ n'anya n'ihi ndị nna nna.
11:29 N'ihi na onyinye na oku na-aga nke Chineke bụ na-enweghị ụta.
11:30 Na dị nnọọ ka ị na-, n'oge gara aga, na-ekweghị na Chineke, ma ugbu a, ị nwetara ebere n'ihi na nke ha ekweghi-ekwe,
11:31 otú a kwa ka a ugbu a-adịghị kweere, gị ebere, ka ha wee nweta ebere nakwa.
11:32 N'ihi na Chineke nchọ onye ọ bụla na ekweghi-ekwe, ka o wee nwee obi ebere na onye ọ bụla.
11:33 Oh, ogbu mmiri nke richness nke amamihe na ihe ọmụma nke Chineke! Si agbanwe ya ikpe, na otú apụghị ịchọpụtacha bụ ụzọ ya!
11:34 N'ihi na ònye mara uche nke Jehova? Ma ọ bụ onye a ndụmọdụ ya?
11:35 Ma ọ bụ onye mbụ nyere ya, nke mere na ịkwụ ụgwọ ga-ji?
11:36 N'ihi na site na ya, na site na ya, na na ya na ihe niile. Iji ya bụ ebube, mgbe nile ebighị ebi. Amen.
Ndị Rom 12
12:1 Ya mere, Ana m arịọ gị, ụmụnna, site ebere nke Chineke, ị na-enye ahụ unu dị ndụ àjà, nsọ na-amasị Chineke, na edo onwe ha n'okpuru nke uche gị.
12:2 Na adịghị họrọ ka o kwekọọ a na afọ, ma kama họrọ ka a gbanwee na newness nke uche gị, ka unu wee na-egosi ihe bụ uche Chineke: ezi ihe, na ihe na-atọ, na ihe nke zuru okè.
12:3 N'ihi na m na-ekwu, site n'amara nke e nyere m, niile ndị nọ n'etiti unu: Nụrụ ụtọ ihe karịrị ọ dị mkpa ka uto, ma nụrụ ụtọ si sobriety na dị nnọọ ka Chineke kenyeworo a òkè nke okwukwe onye ọ bụla.
12:4 N'ihi na dị nnọọ ka, n'ime otu ahụ, anyị nwere ọtụtụ akụkụ, ezie na akụkụ ahụ niile adịghị nwere otu ọrụ,
12:5 otú a kwa ka anyị na-, dị ọtụtụ, bụ otu ahụ na Kraịst, na onye ọ bụla bụ akụkụ, onye nke ọzọ.
12:6 Na anyị na onye ọ bụla nwere dị iche iche onyinye, dị ka amara na e nyere anyị: ma amụma, na nkwekọrịta izi ezi nke okwukwe;
12:7 ma ọ bụ ozi, na-ejere; ma ọ bụ onye na-akụzi, na ozizi;
12:8 onye na-agba ume,, na agbamume; onye na-enye, na mfe; onye na-na-achịkwa, ke ngwa; ọ na-egosi ebere, na ntatido.
12:9 Ka ịhụnanya na-enweghị falseness: asị ọjọọ, ịrapara ezi ihe,
12:10 n'anya ibe ya fraternal ọrụ ebere, kasị ibe na nsọpụrụ:
12:11 ke ngwa, abụghị ndị umengwụ; na mmụọ, ekpesi ike; Onyenwe anyị ozi;
12:12 na olileanya, na-aṅụrị ọṅụ; ná mkpagbu, atachi obi; na-ekpe ekpere, mgbe-njikere;
12:13 na ihe isi ike nke ndị nsọ, na-ekere òkè; na-ele ọbịa, enyịn.
12:14 Agọzi ndị na-na-na-akpagbu unu: agọzi, na adịghị akọcha.
12:15 Na-aṅụrị ọṅụ na ndị na-aṅụrị ọṅụ. Soronụ ndị na-akwa ákwá.
12:16 Ịbụ otu uche n'ebe ibe: bụghị savoring ihe na-elu, ma-ekwenye na ịdị umeala n'obi. Adịghị ahọrọ iyi ihe amamihe dị na onwe gị.
12:17 Enyenụ onye ọ bụla nsogbu maka nsogbu. Nye ezi ihe, bụghị naanị n'anya nke Chineke, ma na-na n'anya mmadụ niile.
12:18 Ọ bụrụ na ọ bụ ike, na dị ka ị na-enwe ike, -adị n'udo na mmadụ niile.
12:19 Ekwela chebe onwe unu, dearest ndị. Kama, kwụpụ wezụga iwe. N'ihi na e dere: "Ịbọ ọbọ bụ nke m. M ga-enye ntaramahụhụ, ka Jehova kwuru. "
12:20 Ya mere ọ bụrụ onye iro bụ agụụ na-agụ, ya nri; ma ọ bụrụ na ọ bụ ya bụ mmiri na-agụ, nye ya a ọṅụṅụ. N'ihi na-eme otú ahụ, ị ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya.
12:21 Ekwela ka ihe ọjọọ merie, kama emeri ihe ọjọọ site ịdị mma.
13:1 Ka mkpụrụ obi ọ bụla n'okpuru ndị isi. N'ihi na ọ dịghị ikike ma e wezụga Chineke na ndị e chiri site na Chineke.
13:2 Ya mere, onye ọ bụla nke na-eguzogide ikike, eguzogide ihe e chiri site na Chineke. Na ndị na-emeri na-enweta ntaramahụhụ maka onwe ha.
13:3 N'ihi na ndi-isi na-adịghị ka isi iyi nke egwu ndị na-arụ ọrụ ọma, ma n'ebe ndị na-arụ ọrụ ihe ọjọ. Na ị ga-ahọrọ na-na-atụ egwu nke ikike? Mgbe ahụ eme ihe dị mma, na ị ga-eto ha.
13:4 N'ihi na ọ bụ onye ozi Chineke n'ihi na ị si ezi. Ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ, na-atụ egwu. N'ihi na ọ bụghị-enweghị ihe mere ọ na-ezisa a mma-agha. N'ihi na ọ bụ onye ozi Chineke; onye ọbọ igbu ọnụma n'ahụ onye ọ bụla ihe ọjọọ.
13:5 N'ihi nke a, ọ dị mkpa na-isiokwu, bụghị nanị n'ihi na iwe, kamakwa n'ihi akọ na uche.
13:6 Ya mere, ị ga na-enye ụtụ. N'ihi na ha bụ ndị ozi Chineke, ejere ya ozi na nke a.
13:7 Ya mere, -enyenụ mmadụ niile ihe ọ bụla e ji. Ụtụ Isi, onye ụtụ isi bụ n'ihi; revenue, onye revenue bụ n'ihi; egwu, onye egwu bụ n'ihi; nsọpụrụ, onye nsọpụrụ bụ n'ihi.
13:8 Ị kwesịrị ị na ji ihe ọ bụla na onye ọ bụla, ma e wezụga ka hụrụ ibe ha n'anya. N'ihi na onye hụrụ onye agbata obi ya mezuru iwu.
13:9 Ọmụmaatụ: Ị ga Akwala iko. I gaghi-egbu. Ị ga Ezula ohi. Ị ga-adịghị ekwu okwu akaebe ụgha. I gaghi-anyaukwu. Na ọ bụrụ na e ọ bụla ọzọ e nyere n'iwu, ọ na-chịkọtara okwu a: Ị ga-agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị.
13:10 Ịhụnanya nke onye agbata obi na-eme ọ dịghị nsogbu. Ya mere, ịhụnanya bụ plenitude nke iwu.
13:11 Ma anyị maara na ugbu a, na ugbu a bụ oge awa ka anyị na-ebili n'ụra. N'ihi ama nzọpụta anyị dị nso karịa mgbe mbụ anyị kweere.
13:12 N'abalị mechaa, na ụbọchị na-eru nso. Ya mere, ka anyị tubà onwe-ọrụ nke ọchịchịrị, na uwe-agha nke ìhè.
13:13 Ka anyị na-eje ije n'eziokwu, dị ka ìhè, ọ bụghị ịga oriri oké mkpọtụ na aṅụrụma, ọ bụghị aghara aghara na mmekọahụ rụrụ arụ, bụghị na esemokwu na anyaụfụ.
13:14 Kama, uwe-Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na-eme ka mba ndokwa maka anụ na ya na ọchịchọ.
Ndị Rom 14
14:1 Ma na-anabata ndị na-adịghị ike n'okwukwe, enweghị na-ese okwu banyere echiche.
14:2 Maka otu onye na-ekwere na ọ nwere ike iri ihe niile, ma ọ bụrụ na onye ọzọ na-adịghị ike, ya rie osisi.
14:3 Onye na-eri kwesịrị adịghị eleda ya onye na-adịghị eri. Na onye na-adịghị eri ghara ikpe onye na-eri. N'ihi na Chineke nabatara ya.
14:4 Ònye ka ị bụ ikpe, bú orù ọzọ? O guzo ma ọ bụ dara site ya Jehova. Ma ọ ga-eguzo. N'ihi na Chineke bụ ike ime ka o guzo.
14:5 Maka otu onye-aghọta otu afọ si esote. Ma ọzọ aghọta si bụla afọ. Ka onye ọ bụla na-abawanye dị ka obi ya.
14:6 Ọ na-aghọta na afọ, na-aghọta n'ihi na Jehova. Ọ na-eri, eri n'ihi na Jehova; n'ihi na ọ na-enye Chineke ekele. Na onye na-adịghị eri, adịghị eri n'ihi na Jehova, na ọ na-enye Chineke ekele.
14:7 N'ihi na anyị dị ndụ maka onwe ya, na onye ọ bụla n'ime anyị na-anwụ anwụ maka onwe ya.
14:8 N'ihi na ọ bụrụ na anyị na-ebi, anyị na-ebi n'ihi na Jehova, ma anyị nwụrụ anwụ, anyị nwụọ n'ihi na Jehova. Ya mere, ma anyị na-ebi ma ọ bụ na-anwụ, anyị bụ nke Jehova.
14:9 N'ihi na Kraịst nwụrụ ma bilie ọzọ n'ihi nzube a: ka o wee bụrụ onye na-achị ma ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ.
14:10 Ya mere,, ihe mere i ji ekpe nwanna gị ikpe? Ma ọ bụ gịnị ka ị na-eleda nwanne gị? N'ihi na anyị niile ga-eguzo n'ihu oche ikpe nke Kraịst.
14:11 N'ihi na e dere: "Ka m na-adị ndụ, ka Jehova kwuru, ikpere niile ga-egburu m, ire ọ bụla ga-ekwupụta na Chineke. "
14:12 Ya mere, onye ọ bụla n'ime anyị ga-achụ nkọwa nke na ya na Chineke.
14:13 Ya mere, anyị agakwaghị na-ekpe ikpe onye ọzọ. Kama, na-ekpe ikpe a ka ukwuu: na ị na-ekwesịghị-edebe ihe mkpọbi ụkwụ n'ihu nwanna gị, ma ọ bụ na-edu ya akpafu.
14:14 ama m, na obi ike na Onyenwe anyị Jizọs, na ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha na nke ya onwe. Ma ya weere ihe ọ bụla na-adịghị ọcha, ọ bụ adịghị ọcha ya.
14:15 N'ihi na ọ bụrụ na nwanne gị na-mwute n'ihi gị nri, ị na-adịghị ugbu a na-eje ije dị ka ịhụnanya. Ekwela ka nri gị na-ebibi ya n'ihi na onye Kraịst nwụrụ.
14:16 Ya mere, ihe dị mma ka anyị ekwesịghị ịbụ a na-akpata nkwulu.
14:17 N'ihi na alaeze Chineke abụghị nri na ihe ọṅụṅụ, kama ikpe ziri ezi na udo na ọṅụ, na Mmụọ Nsọ.
14:18 N'ihi na onye na-eje ozi Christ na a, atọ Chineke ụtọ ma na-pụtara n'ihu ndị mmadụ.
14:19 Ya mere, ka anyị na-achụso ihe ndị na-udo, na ka anyị na-na ihe ndị na-maka edification ibe.
14:20 Atụla njikere ibibi ọrụ Chineke n'ihi nri. N'ezie, ihe niile dị ọcha. Ma, e nwere nsogbu n'ihi na onye iwe site na-eri.
14:21 Ọ dị mma-ezere iri anụ na ịṅụ mmanya, na site na ihe ọ bụla nke nwanne gị ji gị iwe, ma ọ bụ duhie, ma ọ bụ ebelatawo.
14:22 Ị nwere okwukwe? Ọ bụ nke gị, otú jide ya n'iru Chineke. Gọziri agọzi ka ọ bụ onye na-adịghị ekpe ikpe onwe ya na site nke ọ na-anwale.
14:23 Ma onye-aghọta, ma ọ bụrụ na ọ na-eri, ikpe, n'ihi na ọ bụ okwukwe. N'ihi na ihe niile na-adịghị nke okwukwe bụ mmehie.
Ndị Rom 15
15:1 Ma, anyị bụ ndị siri ike ga-eburu na feebleness nke na-adịghị ike, na ọ bụghị otú ahụ dị ka ihe na-amasị anyị onwe anyị.
15:2 Onye ọ bụla n'ime unu na-amasị onye agbata obi ya si dị mma, maka edification.
15:3 N'ihi na ọbụna Kraịst emeghị ihe masịrị onwe ya, ma dị ka ọ na e dere: "Nkọcha nke ndị na-akọcha gị wee dakwasị m."
15:4 N'ihi na ihe ọ bụla e dere, e dere na-akụziri anyị, ka ọ were, site na ndidi na nkasi-obi nke Akwụkwọ Nsọ, nwee olileanya.
15:5 Ya mere, ka Chineke nke ntachi-obi na nkasi obi mee ka unu na-nke otu uche na-emeso ibe, n'ikwekọ Jesus Christ,
15:6 ka ọ were, ọnụ na onye ọnụ, i nwere ike ito Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
15:7 N'ihi nke a, anabata onye ọzọ, dị nnọọ ka Kraịst na-anabatala gị, na nsọpụrụ nke Chineke.
15:8 N'ihi na m na-ekwusa na-Christ Jizọs bụ ozi nke ibi úgwù n'ihi na nke eziokwu nke Chineke, ka iji gosi na nkwa na nna,
15:9 na na ndị Jentaịl bụ ndị na-asọpụrụ Chineke n'ihi ebere ya, dị nnọọ ka e dere: "N'ihi nke a, M ga-ekwupụta na ị n'etiti mba, O nwe-ayi, na m ga-abụ abụ na aha gị. "
15:10 Na ọzọ, ọ na-ekwu: "Ṅụrịa ọṅụ, O mba, tinyere ndị ya. "
15:11 Na ọzọ: "All mba ọzọ, ito Jehova; na ihe niile dị iche iche, ibuli ya elu. "
15:12 Na ọzọ, Aịsaịa na-asị: "E nwere ga-abụ a mgbọrọgwụ Jesi, na ọ ga-ebili ịchị mba, na na ya na Jentaịl ga-enwe olileanya. "
15:13 Ya mere, ka Chineke nke olileanya mee ka unu jupụta ọ bụla ọṅụ na udo, na ikwere, ka unu wee jupụta n'olileanya na na omume nke Mmụọ Nsọ.
15:14 Ma m jikwa n'aka banyere gị, ụmụnna m, ka unu na-e jupụtara n'ịhụnanya, dechara n'ihe ọmụma nile, nke mere na ị na-enwe ike-adụ ha ọdụ ibe.
15:15 Ma, m na e dere gị, ụmụnna, ọzọ ji obi ike karịa ndị ọzọ, dị ka ma ọ bụrụ na na-akpọ gị na-uche ọzọ, n'ihi amara nke e nyere m si na Chineke,
15:16 nke mere na m nwere ike a na-eje ozi nke Kraịst Jizọs, n'etiti mba, edo Oziọma nke Chineke, ka onyinye iji biaru nso nke ndi mba ọzọ nwere ike na-anakwere na ike nsọ nime Mọ Nsọ.
15:17 Ya mere, M nwere ekele na Kraịst Jizọs tupu Chineke.
15:18 N'ihi ya, m mere adịghị ekwu okwu nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ Kraịst anaghị mmadụ site n'aka m, rue iṅa-nti ndi mba ọzọ, n'ọlu na okwu,
15:19 na ike nke ihe ịrịba ama na ọlu-ebube, site n'ike nke Mmụọ Nsọ. N'ihi na n'ụzọ dị otú a, si Jerusalem, nile gburugburu ya, dị nnọọ ka Ilirikọm, M replenished ozioma Kraist.
15:20 Na otú m ekwusa a Gospel, abụghị ebe Christ maara site aha, ka m'we ghara iru n'elu ntọala ọzọ,
15:21 kama dị nnọọ ka e dere: "Ndị ọ na-mara ọkwa ga aghọta, na ndị na-anụbeghịkwa ga-aghọta. "
15:22 N'ihi na nke a na-, M nnọọ na-egbochi na-abịakwutekwa gị, na m na a gbochie ruo ugbu a.
15:23 Ma n'ezie ugbu a, enweghị ndị ọzọ na-aga n'ebe ndị a na mpaghara, na ebe ama ama a oké ọchịchọ na-abịa gị na n'oge gara aga ọtụtụ afọ,
15:24 mgbe m na-amalite setịpụrụ na njem m na Spain, M olileanya na, dị ka m na-agafe, M nwere ike ịhụ gị, na m nwere ike na-edu site n'ebe ị, mgbe mbụ ọ na amuworom nkpuru ufọdu n'etiti unu.
15:25 Ma na-esote m ga-esi maka Jerusalem, ozi nsọ.
15:26 N'ihi na ndị Masedọnia na Akaia ezi kpebiri ime ka a collection maka ndị ndị ogbenye n'etiti ndị nsọ bụ ndị na Jerusalem.
15:27 Na nke a dị ha mma, n'ihi na ha nọ ụgwọ ha ji. N'ihi na, ebe ọ bụ na ndị Jentaịl ga ndị nketa nke ime mmụọ ha, ha onwe-ha kwesịrị ijere ha ozi na ụwa ihe.
15:28 Ya mere, mgbe m dechara ọrụ a, na agbawokwa ha mkpụrụ a, M ga-esi, na nke unu, na Spain.
15:29 Na m maara na mgbe m na-abịa gị, m ga-abata na ihe n'ụba ngọzi nke Gospel of Christ.
15:30 Ya mere, Ana m arịọ gị, ụmụnna, site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ọ bụ ezie na ịhụnanya nke Mmụọ Nsọ, na ị enyere m aka na gị Chineke ekpere na m n'ihi,
15:31 nke mere na m nwere ike na-tọhapụrụ-ekwesịghị ntụkwasị obi nọ na Judia, na na nbuli nke m ọrụ nwere ike ịbụ na-anabata ndị nsọ na Jerusalem.
15:32 Ya mere, ka m na-abịa gị na ọṅụ, site n'ọchichọ nke Chineke, otú a, ka m ga-enweta ume ọhụrụ na ị.
15:33 Na ike Chineke nke udo nọyere unu nile. Amen.
Ndị Rom 16
16:1 Ugbu a, m na-aja unu nwanna anyị nwaanyị Phoebe, onye nọ na-ekwusa ozi ọma nke ụka, nke dị na Senkrea,
16:2 ka unu wee na-enweta ya na Jehova na iru eru nke ndị nsọ, na nke mere na ị nwere ike nke aka ka ya na ihe ọ bụla ọrụ ọ ga-mkpa na ị na. N'ihi na ya onwe nwekwara aka ọtụtụ, na onwe m.
16:3 Ẹkọm Priska na Akwịla, m enyere ya aka Christ Jesus,
16:4 ndị okowụt olu nke aka ha na nnọchite nke ndụ m, n'ihi na onye m na-enye ekele, bụghị naanị m, kamakwa ụka nile nke mba;
16:5 na-ekele ndị chọọchị na ụlọ ha. Ẹkọm Epaenetus, m hụrụ n'anya, nọ n'etiti nkpuru mbu nke Asia na Christ.
16:6 ekele Mary, onye dọgburu onwe ukwuu n'etiti unu.
16:7 Ẹkọm Andronicus na Junias, m ikwu na ndị mkpọrọ ibe, bụ ndị magburu onwe n'etiti Ndịozi, na ndị nọ Christ tupu m.
16:8 oke Ampliatus, kasị hụrụ n'anya ka m na Jehova.
16:9 Ẹkọm Urbanus, onye inyeaka anyị na Kraịst Jizọs, na Stachys, m hụrụ n'anya.
16:10 Ẹkọm Apelles, onye a nwalere n'ime Kraịst.
16:11 Keleenụ ndị bụ ndị si n'ezinụlọ Aristobulus. Ẹkọm Herodian, m ikwu. Keleenụ ndị bụ ndị ezinụlọ Narcissus, na-na-nwe-ayi.
16:12 Ẹkọm Traịfina na Traịfosa, onye ọrụ n'ime Onyenwe anyị. Ẹkọm Persis, kasị hụrụ n'anya, onye dọgburu onwe ukwuu n'ime Onyenwe anyị.
16:13 Ẹkọm Rufọs, hoputara n'ime Onyenwe anyị, ya na nne ya nke m.
16:14 Ẹkọm Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, na ụmụnna ndị ha na ha.
16:15 Ẹkọm Philologus na Julia, Nereus na nwanne ya nwaanyị, na Olympas, na ndi nsọ nile ndi ha na ha nọ.
16:16 -Ekele ibe nsusu ọnụ dị nsọ. All ụka nke Kraịst na-ekele unu.
16:17 Ma m na-arịọ gị, ụmụnna, na-arịba ndị na-akpata esemokwu na mmejọ megidere ozizi unu mụtaworo, na chigharia ha.
16:18 N'ihi na ndị dị otú ahụ dị ka ndị a na-anaghị efe Kraịst Onyenwe anyị, ma ha n'ime selves, na, site ụtọ okwu na nkà ikwu okwu, ha ghọgbuo obi nke aka ya dị ọcha.
16:19 Ma unu na-erubere e ka a mara nke ọ bụla ebe. Ya mere, M na-aṅụrị ọṅụ na i. Ma m chọrọ ka ị na-abụ ihe amamihe dị na ezi ihe, na mfe na ihe ọjọọ.
16:20 Na ike Chineke nke udo ngwa ngwa-azọpịa Setan n'okpuru ụkwụ gị. Amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na na na.
16:21 Timoti, ibe m ọrụ, ekele gị, na Lushiọs na Jesin na Sosipater, m ikwu-.
16:22 M, atọ, onye dere ihe a ozi, na-ekele unu n'ime Onyenwe anyị.
16:23 Geyọs, m usu, na dum ụka, ekele gị. Erastus, na àkù nke obodo, ekele gị, na Quartus, a nwanne.
16:24 Ka amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na na na niile. Amen.
16:25 Ma onye bụ ike iji gosi na ị dị ka m Gospel na nkwusa nke Jesus Christ, dị na nkpughe nke ihe omimi nke a na-ezo site n'oge immemorial,
16:26 (nke ugbu a, e mewo ka o doo anya site n'Akwụkwọ Nsọ nke Ndị Amụma, dị na iwu nke Chineke ebighị ebi, rue nrubeisi nke okwukwe) nke e mekwara ka a mara n'etiti ndị nile ndi mba ọzọ:
16:27 Chineke, onye naanị bụ ihe amamihe, site n'aka Jizọs Kraịst, ya bụrụ onye nsọpụrụ na otuto ruo mgbe ebighị ebi ma na mgbe. Amen.